Shiinaha Dog Poo Waste Bacda Qaybiyaha Holder Butros Socodka siyaada warshad iyo saarayaasha | Ihome
Tilmaamaha Tilmaanta 1. Waa hayaha boorsada saxaarada oo u eg qiiro caan ah! 2.Waxaa kujira 2 duub oo jawaano saxan ah. (17 jawaan duubkiiba) 3.Wuxuu hayaa xarig gacmeed aan gacmo-lahayn. Adeegsiga Badeecada 1. Meelaha bulshada: soo qaado saxarada xayawaanka iyo qaado bacaha ilaalinta deegaanka; 2. waxaa loo isticmaali karaa meelaha dadweynaha: bacaha qashinka lagu qaadan karo la qaadan karo; 3.can waxaa loo isticmaali karaa gawaarida: bacda qashinka mini nooca jillaab nooca qashinka; 4. waxaa loo isticmaali karaa miiska: weel kasta oo lagu keydin karo Specificat ...
1.Waa kiish boorso sita oo u eg emoticon caan ah!
2.Waxaa kujira 2 duub oo jawaano saxan ah. (17 kiish duubkiiba)
3.Wuxuu hayaa faashad suunka gacanta, gacmo-la’aan ah.
Adeegsiga Wax Soo Saarka
1.Deegaanka guud: soo qaado saxarada xayawaanka la qaado waxayna qaadaan bacaha ilaalinta deegaanka;
2. waxaa loo isticmaali karaa meelaha dadweynaha: bacaha qashinka lagu qaadan karo la qaadan karo;
3.can waxaa loo isticmaali karaa gawaarida: bacda qashinka mini nooca jillaab nooca qashinka;
4. waxaa loo isticmaali karaa miiska: weel kasta oo la keydin karo
Cabir: 20cm * 15cm
Miisaanka alaabta: 90g / 0.19lb
Bixinta & bixinta
Waqtiga hogaaminta: 1-15 maalmood ama wax la mid ah
Hore: Shukumaanka Bath Ey Tuwaalka Degdega ah ee lagu qalajiyo Towladaha Chenille
Xiga: Dog Poo Waste Holder Holder Dispenser Cute Animal Shape
Dog Poo Waste Holder Bag Hay Di ...
Cadaadis Cuncun Ey Qaaday ...
Eey Pooper Iowah Butros Poop ...
Butros Bath Dog tuwaalka Quick Dr ...
Woof Dhaqe 360 ​​Bath Artifa ...